Shiinaha Harrow culus Harrow Waayo, Beeraha warshad 1BJ iyo alaab-qeybiyeyaasha | RY AGRI
1BJX harrow-xajmiga dhexdhexaadka ah wuxuu ku habboon yahay jajabinta iyo furfurista carrada ciida ka dib beerashada iyo diyaarinta dhulka ka hor abuurka. Waxay ku qasan kartaa carrada iyo bacriminta dhulka la beeray oo ay ka saari kartaa jirridda dhirta. Badeecadu waxay leedahay qaab dhismeed macquul ah, xoog qaadis xoog leh, adkeysi, howl fudud, dayactir fudud, waxayna si wax ku ool ah u burburin kartaa ugana wadi kartaa carrada si dhulku u noqdo mid siman, kuwani waxay la kulmaan baahiyaha beeraha degdegga ah.
Maaddada ku jirta saxanka waa 65MN, maaddadani waa mid aad u adag, sidaa darteed way fududahay in lagu jajabiyo carrada ku taal dhul beereedka.
Taxaddarrada Ku Xidhitaanka Harrow
1. Wixii qalfoofka geesaha buuxa ah, waa caadi in si fiican loo rakibo, iyadoon loo eegin haddii rarku isku mid yahay; loogu talagalay harrow-ga la garaacay, si culayska loo saaro kooxda harrow oo isku mid ah, waa in dhagaha la gashaa hargeysa agteeda la isku dheelitiraa.
2. Si looga fogaado in booska sido uusan la jaan qaadi karin saxanka taageerada isku xiraya qaacidada meertada inta lagu gudajiro shirka guud, waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo in booska lagu xirayo rullaluistemka rake uusan khaldamin.
3. Si loo sameeyo tuubada dhexdhexaadka ah iyo rakuyuhu si dhow isku dhafan, dhamaadka weyn ee tuubbada dhexe waa inuu u dhawaadaa dusha sare ee qalooca dusha, iyo dhamaadka yar ee tuubbada dhexe waa inay u dhowdahay dusha guud ee isku xirnaanta rake. Haddii uu jiro farqi u dhexeeya meelaha dusha lagala xiriirayo, waa inuusan ka badnaan 0.6 mm.
4. Ugu dambeyntiina, adkee geedka lowska godka gebi ahaanba oo xir. Haddii lowska laba geesoodka ah si dhab ah loo adkeeyay iyo in kale saameyn weyn ayuu ku leeyahay shaqada iyo nolosha kooxda harrow. Haddii ay wax yar dabacsan tahay, daloolka gudaha ee saxanka harrow ayaa dhaqaaqi doona marka loo eego shakhsiga iyo fallaaraha laba jibbaaran. Daloolka godka hoose ee saxanka harrow ayaa "gunti doona" wareegga godka laba jibbaaran (walxaha saxanka harrowga, sida wiishku adag yahay), si wiishka laba jibbaaran uu u laallamo ama u jabo.
Kaydinta Iyo Dayactirka Ka Dib Dhamaadka Xilliga
1. Ka saar dhammaan carrada iyo qashinka kale raashinka
2. Saliidaynta sida ku cad tilmaamaha
3.Wuxuu nadiifin doonaa mashiinka iyo keydinta, shaqo fiican oo kahortaga qorraxda ka samee
Xiga: Harrow Disc culus oo loogu talagalay Beeraha 1BQX